Ny OnePlus 6 dia novohana tamin'ny sary tsotra an'ny tompony | Androidsis
Ny fiarovana rehefa miaro ny fidirana amin'ny fitaovantsika dia iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra izay tsy maintsy raisintsika rehefa mividy terminal vaovao. Hatramin'ny nanombohan'ny Apple ny iPhone X tamin'ny Face ID dia maro ny mpamokatra nandefa kinova mitovy amin'izany izay mamela anao hamaha ny terminal anao amin'ny tarehy.
Saingy ny ankamaroan'ireny terminal ireny, raha tsy 100%, dia tsy mampiasa, amin'ny fomba hafa, ny teknolojia izay hitantsika ao amin'ny iPhone X, noho izany tononkalo toy izany ny fehezany raha ampitahaintsika amin'ny mpamokatra sisa izay nampihatra izany tsy misy fanamarinana. Ny mpanamboatra farany manaporofo fa tsy misy ilana azy ny rafitra miaiky ny endrik'izy ireo dia OnePlus.
Nataoko pirinty ny tarehiko hamaha ny OnePlus 6 ho an'ny lulz… niasa tamin'ny ___ (ツ) _ /Ā pic.twitter.com/rAVMq8JKBr
- rik (@rikvduijn) Enga anie 29, 2018
Araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambony, ny mpampiasa iray dia nahavita nanokatra ny OnePlus 6, tamin'ny alàlan'ny rafitra famantarana ny tarehy, ny OnePlus 6 an'ny namana iray mampiasa sary azy nopetahana ary apetraka eo alohan'ny fitaovana. Mba ho matotra kokoa dia nanandrana nanokatra ny OnePlus 6 ity mpampiasa ity niaraka tamin'ny sarin'ny sakaizany mainty sy fotsy ary namela ny fidirana amin'ny terminal ny rafitra famantarana ny tarehy.
Tsy sambany io, sady tsy ho farany, efa nitranga tamin'i Samsung ihany koa io, fa misy terminal Android mirehareha amin'ity asa ity, fiasa natao hivarotana telefaona, satria izay voalaza fa miaro ny telefaona dia tsy marina.
Fantatry ny mpanamboatra tsara izany azo lavina ny rafitra miaiky ny endrinyNoho izany, ny tsirairay amin'izy ireo dia manohy mampiditra ny safidin'ny sensor sensor ho toy ny rafitra fiarovana ny fitaovana tsy voatery, na dia tsy mampiasa izany aza ny ankamaroan'ny mpampiasa, satria mahazo aina kokoa ny mitondra ny smartphone amin'ny tarehy noho ny mitady azy. . izay misy ny sensor sensor amin'ny dian-tànana ao ambadiky ny fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny OnePlus 6 dia novohana tamin'ny sary tsotra an'ny tompony